トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Features uye zvakafanana pfungwa mweya naye
In kudzokorora kuberekwazve, mweya naye, iyo hwakavaka ukama zvakadzama vakasangana nguva imwe neimwe ndizvo Zvechokwadi mukuru wokuti kuti Panewo munyika ino. Takarambana ndakasangana vanhu, asi chinhu kuti kunetseka kana pane mweya nomudzimai mairi.
kana anosangana mweya naye, anoti zvinhu kuyeuka pfungwa yokuti kusafanana nedzimwe vanhu. Kana musingadi akakunda zviri kuti kunzwa, zvingaratidza kuti tisangoti mweya naye kuti zvikuru dambudziko vakasangana.
Saka nguva iyi, ndakaedza anosanganisira zvinhu uye zvakajairika pfungwa kuti vanonzwa mweya naye. Kana iwe yeuka izvi, uchazonakidzwa kuda kubata musangano mweya naye.
vanhuwo pfungwa zvinhu uye vanonzwa ane mweya naye? Kana
raramba mweya naye uye Exchange, vazhinji varipo achawira nevamwe pfungwa. Kuti kunzwa chinhu uchinzwa chakafanana apo vakasangana mweya naye. Ngatitorei Kutarira mariri.
? vanhu rutsigiro sokuti kana zvichidiwa
somuenzaniso, Takamira kuchinja muupenyu hwako, unogona kutambura Chii Fumo iyo nzira. nguva yakadaro chii vanhu rubatsiro uye wedzera kunodiwa. Rutsigiro uye munhu akaita wedzera chinowanzoitika mweya naye. Ukuwo, akadai kana pasina dambudziko zvose ndichaendawo zvakanaka, dzimwe nguva kuti havafariri riri kuonekwa kuti hapana chikonzero kutsigira mweya naye.
? Kana nazvo kuti pane
mweya mate chinhu kwaunonzwa musangano wokutanga, kana kurangarira kunzwa, akadai magetsi Zara kubva musangano Danho rokutanga, anonzi kana pane avo kuti vauye nembambo. Uyewo, nekuti havanzwi sokuti ndakasangana kokutanga, ndiyo imwe zvaidiwa nguva ndakasangana nomweya mumwe. In dzangu, kana Ndinorangarira pakuti kusiyana nguva kusangana nevamwe vanhu, kuti munhu nesimba mweya naye. _x00 0D_
? kunyange kuti hapana chikonzero haangosarudzi
anogona kuva norugare rwepfungwa ari pamwe chete, zvinogona zvimwe rugare rwepfungwa uye munhu uyu, ndinofunga Ndinoshuva mberi yose nzira nguva ino, ndinofunga kuti kufanana. A mweya wako shamwari vakapedza iyoyo kakawanda kubva ino kupfuura kare. Nokuda kwechikonzero ichi, chikonzero ndechokuti pfungwa akadzikama uye kuva pamwe chete pasina, ini saka kurangarira kunzwa wakachengeteka. Apo
? Mashoko hwapera
mweya naye kuti kunzwa anogona kuonekwa pasina, kunyange kana pasina shoko zvingangokukunda kunouya kuburikidza nemanzwiro zvomumwe bato. Nekuti iwe uri Kizuke akwirwe zvakadzama pachinhu mumwe vanokwezvwa nomweya, mashoko haudi. Uyezve, sezvo imi akatamisira hazvina zvakakodzera kuedza kuverenga pfungwa uye kuziva, tinogona kuva chaiwo mamiriro pasina zvisingabviri.
? pfungwa uye
achiona kana kutsaudzira hariwaniki zvakaitwa vachatitaka nguva dzose zvakafanana nokuva pamwe chete, ndiye mweya naye kuti vanopedza zvakanaka pasina zvimwe chikonzero kusuduruka wavelengths uye maitiro anogona kufunga mumwe. Apo Do wavelength zvakakodzera ndiyo kunzwa wangu, rimwe bato uyewo ungadai akafunga kudaro. Kana kwete pamusoro ruoko rumwe, kuti mumwe ari akasununguka.
Munhu akadaro zvinoshamisa pedyo ipapo anofanira
kumusoro, isu takasiya kuti zvinhu uye zvakajairika pfungwa kuti vanonzwa mweya naye kuti. Asi haana kuziva kusvikira ikozvino, ndinofunga mumwe bato akanzwa nenzira iyi hakusi kuti kuvhara chete pamwe. Kuti murege kurasikirwa kuti kunzwa, ngationei nokungwarira nokurerwa ukama nevamwe bato.
, Saka yeuka pfungwa vakachengeteka. Apo
Hands vaizofunga kudaro. Kana kwete pamusoro ruoko rumwe, kuti mumwe ari akasununguka.